FAQs and Terms and Conditions for SUNNY eSTORE Gift Cards
SUNNY eSTORE Gift Card ဝယ်ယူမှုအတွက်သိကောင်းစရာများ
SUNNY eSTORE Gift Card က ဘယ်သူတွေအတွက်လဲ။?
မိမိချစ်ခင်ရသူတွေကို လက်ဆောင်ပေးတဲ့အခါ သူတို့ကိုယ်တိုင် အမှန်တကယ်လိုအပ်တာတွေရွေးချယ်ဝယ်ယူနိုင်ဖို့ငွေသားဖြည့်သွင်းထားတဲ့ မေတ္တာလက်ဆောင်အဖြစ် SUNNY eSTORE Gift Card တွေပေးအပ်နိုင်ဖို့ ရည်ရွယ်ပါတယ်။
SUNNY eSTORE Gift Card များကို မိမိချစ်ခင်ရသူဆီ surprise လုပ်ပြီးလည်းပို့ဆောင်နိုင်ပါတယ်။ Gift Card ဝယ်ယူတဲ့အခါ Send as Gift ကို ရွေးချယ်ပြီးပို့ဆောင်ပေးစေလိုတဲ့ အချက်အလက်များထည့်သွင်းပေးရုံပါပဲ။ SUNNY eSTORE မှာ eGift Card လှလှလေးကို Email မှတစ်ဆင့် ပို့ဆောင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
What is the SUNNY eSTORE Gift Card?
These SUNNY eSTORE Gift Cards allow you to send well-wishes to your loved ones and respectable elders, and enabling them to select gifted products of their choice!
You can surprise the recipients, with the “Send as Gift” option by sending them an electronic gift card on email.
SUNNY eSTORE GiftCard တွေကို ဘယ်လိုရရှိနိုင်မလဲ။?
SUNNY eSTORE website (www.sunny.com.mm) မှတိုက်ရိုက်မှာယူနိုင်တဲ့အပြင် SUNNY eSTORE Facebook Messager ကိုလည်း နေ့စဉ် နံနက်၇နာရီမှ ည၁၀နာရီအတွင်းဆက်သွယ် မှာယူနိုင်ပါတယ်။ မှာယူပြီးတဲ့အခါ ငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းနဲ့ ပို့ဆောင်မှုအချက်အလက်များကို စိစစ်ဖို့ SUNNY eSTORE Customer Service Team မှဆက်သွယ်ပေးပါလိမ့်မယ်။ လူကြီးမင်းရဲ့ ငွေပေးချေမှုကို စိစစ်ပြီးတဲ့အခါ ငွေဖြည့်သွင်းထားတဲ့ ကုဒ်နံပါတ်ပါဝင်တဲ့ eGift Card ကိုလူကြီးမင်းရွေးချယ်ထားတဲ့ ပို့ဆောင်မှာအချက်အလက်များထဲကအတိုင်း ပေးပို့ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
How can I get the SUNNY eSTORE Gift Card?
You can purchase the SUNNY eSTORE Gift Cards directly on the website or via the Facebook Messenger. You can also contact our customer service team between 7AM – 10PM daily to make the purchases.
Once the payment for the SUNNY eSTORE Gift Card has been made, we will send it to the intended recipient as per the purchase instructions.
Gift Card ဝယ်ယူတဲ့အခါ ငွေဘယ်လိုချေရမလဲ။?
ဒီ SUNNY eSTORE Gift Card တွေဟာ eGift Card တွေဖြစ်လို့ KBZPay ငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းဖြင့်သာ ဝယ်ယူနိုင်ဦးမှာပါ။
How can I make the payment for the gift card?
Due to the electronic nature of the gift card, we are only able to accept digital payments via KBZPay.
SUNNY eSTORE GiftCard ကို ဘယ်မှာသုံးနိုင်မလဲ။?
SUNNY eSTORE Gift Card ကိုဝယ်ယူတဲ့အခါ မိမိရွေးချယ်ဝယ်ယူထားတဲ့တန်ဖိုးအတိုင်း ငွေဖြည့်သွင်းပေးထားတဲ့ ကုဒ်နံပါတ်ပါဝင်တဲ့ eGift Card ရရှိမှာဖြစ်ပြီး SUNNY eSTORE က မည်သည့်ပစ္စည်းကိုမဆိုဝယ်ယူရာမှာ ယင်းကုဒ်နံပါတ်ကိုအသုံးပြုပေးချေနိုင်ပါတယ်။ ဖြည့်သွင်းထားတဲ့ငွေပမာဏမကုန်မချင်း ထပ်ခါတလဲလဲအသုံးပြုနိုင်ပြီး ဖြည့်သွင်းထားတဲ့ငွေပမာဏထပ်ကျော်လွန်နေပါက ကျော်လွန်ငွေကို အခြားငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းများ (ဥပမာ ပစ္စည်းရောက်ငွေချေစနစ်၊KBZPay)ဖြင့် ပေးချေနိုင်ပါသေးတယ်။
Where can I use the SUNNY eSTORE Gift Cards?
The recipient of the gift card will receiveacode which can be used at the point of check out to offset the payment. This code can be used on any purchase on SUNNY eSTORE and can be used for multiple times until the value is depleted.
If you exceed the amount of the gift card, you can also pay for the product and use other methods such as cash on delivery or KBZPay for the balance due.
SUNNY eSTORE Gift Card အသုံးပြမှုဆိုင်ရာ စည်းကမ်းချက်များ
SUNNY eSTORE Gift Card များ၏ သက်တမ်းကုန်ရက်မှာ ဝယ်ယူပြီး (၆)လ ဖြစ်ပါသည်။
အခြားဖော်ပြချက်များ မရှိပါက သင် မှာယူနိုင်သည့် အရေအတွက်မှာ ပစ္စည်း stock လက်ကျန်ရှိနေသည့်အထိ မည်သည့်အကန့်အသတ်မှ မရှိပါ။
Terms and conditions of the SUNNY eSTORE Gift Card
Gift card is valid for6month.